ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး လူ ၁၁ ယောက်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ ဘာလုပ်နေသလဲ? – Gentleman Magazine
အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ အများစုဟာ သူတို့ဘဝတက်လမ်းကို ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာတင် စတင်ရှာဖွေနေကြပါပြီ။ သူတို့ ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက ဘာတွေလုပ်နေလဲ ကြည့်ကြရအောင်။
၁. Bill Gates
Gates ဟာ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှ. ကွန်ပျူတာတွေကို ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပြီး သူ အသက် ၁၅ နှစ်မှာ သူ့သူငယ်ချင်း မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Paul Allen နဲ့အတူ Traf O Data ဆိုတဲ့ Program တစ်ခုကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းပြီးတော့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ခဲ့ပေမယ့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှာ အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ၁၉၇၅ မှာကျောင်းထွက်လိုက်ပါတယ်။
၂. Warren Buffett
အသက် ၁၆ နှစ်မှာ ဒေါ်လာ ငါးသောင်းခွဲလောက် စုဆောင်းမိနေပြီဖြစ်တဲ့ Buffett ဟာ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ သတင်းစာပို့တဲ့ အလုပ်ကို စလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဂေါက်သီးရောင်းတာ၊ ကားပြင်တာ၊ တံဆိပ်တုံးရောင်းတာတွေကို ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၃. Oprah Winfrey
Winfrey ဟာ သူအသက် ၁၄ နှစ်မှာ သူ့အဖေဆီ ပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ သူမပထမဆုံး အလုပ်ကို ၁၆ နှစ်မှာ ရေဒီယိုစတေရှင်တစ်ခုမှာ ရခဲ့ပါတယ်။ ၁၉ နှစ် တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်း သူမကို တီဗွီစတေရှင်တစ်ခုက အလုပ်ခေါ်ခဲ့တာကြောင့် စွန့်စားပြီး ကျောင်းထွက်ကာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၄. Mark Zuckerberg
Mark ရဲ့ ဝါသနာက ပရိုဂရမ်ရေးတာပါ။ အသက် ၁၂ မှာ သူ့အဖေရဲ့ ရုံးအတွက် စာပို့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းမှာ Music Streaming Platform တစ်ခုကို ရေးသားခဲ့ပြီး Microsoft နဲ့ AOL က ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကို ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ Harvard မှာနေတဲ့ အစောပိုင်းနှစ်တွေမှာ သူ့အဆောင်ခန်းထဲကနေ Facebook ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ Facebook မှာ ပိုအချိန်ပေးနိုင်ဖို့ နောက်နှစ်မှာ ကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။
၅. Elon Musk
Tesla နဲ့ SpaceX CEO ဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးကွန်ပျူတာကို သူအသက် ၁၀ နှစ်မှာ ဝယ်ခဲ့ပြီး နောက်နှစ်နှစ်ကြာတော့ Blaster ဆိုတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုရဲ့ Code ကို ရေးခဲ့ပါတယ်။
၆. Mark Cuban
ဒီ ဘီလျံနာကတော့ သူ့လုပ်ငန်းတွေကို အသက် ၁၂ နှစ်မှာ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါ။ တစ်ဘူးကို ၃ဒေါ်လာ အမြတ်နဲ့ အမှိုက်အိတ်ဘူးတွေကို Door to Door လိုက်လံ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းမှာလဲ တံဆိပ်တုံးတွေနဲ့ ဒင်္ဂါးပြားတွေ ရောင်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်စားရိတ် ကိုယ်ရှာပြီး တက္ကသိုလ် တက်ခဲ့ပါတယ်။
၇. Jeff Bezos
အသက် ၄ နှစ်နဲ့ ၁၆ နှစ်အတွင်း ဒီ ဘီလျံနာလောင်းလေးဟာ သူ့အဖိုးရဲ့ လယ်တောအိမ်မှာ ပစ္စည်းတွေ ပြင်ရင်း အချိန်ကုန်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ McDonald မီးဖိုချောင်မှာ အလုပ်သမားလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံး Bezos နဲ့ သူ့ရည်းစားဟာ ကလေးတွေအတွက် ဆယ်ရက် နွေရာသီစခန်း Dream Institute ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
၈. Richard Branson
၁၉၆၈ မှာ အသက် ၁၇ နှစ်လူငယ် Branson ဟာ Student လို့ခေါ်တဲ့ လူငယ်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုကို ထုတ်ခဲ့ပြီး ကြော်ငြာကနေတင် ဒေါ်လာ ၈ထောင် မြတ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ၂ နှစ်အကြာမှာ အုတ်ခဲဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲဒိအဆောက်အဦးက Virgin Record ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၉. Carl Icahn
ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ Icahn ဟာ ပရင်စတန် တက္ကသိုလ်ကို ဝင်ခွင့်ရပေမယ့် ငွေပြတ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပျော်ပွဲစားရုံတစ်ခုမှာ စားပွဲထိုး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကလပ်ပိုင်ရှင်တွေက ပိုကာကစားရာမှာ Icahn ကို ခေါ်ကစားခဲ့ပါတယ်။ ကစားနည်းကို ကျွမ်းကျင်လာပြီးနောက်မှာတော့ တစ်နွေရာသီကို ဒေါ်လာ ၂ထောင် ရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ၂၄ ဘီလျံလောက် ပိုင်နေပါပြီ။
၁၀. Phil Knight
Nike တည်ထောင်သူဟာ သူ့ကျောင်းမှာ အပြေးသမား တစ်ယောက်ပါ။ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လဲ ဆက်ပြီး အပြေးပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ အပြေးဖိနပ်တွေကို အရည်အသွေး အသဘောမကျရာက စပြီး ၁၉၆၄ မှာ Nike ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၁. Janet Yellen
US Fedral Reserve ရဲ့ Chairman Yellen ဟာ ဆယ်ကျော်သက်အနေနဲ့ အတော့်ကို တော်တာပါ။ အထက်တန်းကျောင်း နောက်ဆုံးနှစ်မှာ တက္ကသိုလ်က သင်္ချာအတန်းတွေ သွားတက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၃ မှာ Class Scholar အဖြစ် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသတင်းစာရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ်ဘာ့အအောငျမွငျဆုံး လူ ၁၁ ယောကျဟာ ဆယျကြျောသကျဘဝမှာ ဘာလုပျနသေလဲ?
အောငျမွငျကြျောကွားသူ အမြားစုဟာ သူတို့ဘဝတကျလမျးကို ဆယျကြျောသကျဘဝမှာတငျ စတငျရှာဖှနေကွေပါပွီ။ သူတို့ ဆယျကြျောသကျတုနျးက ဘာတှလေုပျနလေဲ ကွညျ့ကွရအောငျ။
Gates ဟာ ဆယျကြျောသကျဘဝမှ. ကှနျပြူတာတှကေို ခဈြကြှမျးဝငျခဲ့ပွီး သူ အသကျ ၁၅ နှဈမှာ သူ့သူငယျခငျြး မိုကျခရိုဆော့ဖျ ပူးတှဲတညျထောငျသူ Paul Allen နဲ့အတူ Traf O Data ဆိုတဲ့ Program တဈခုကို ရေးခဲ့ပါတယျ။ အထကျတနျးကြောငျးပွီးတော့ ဟားဗတျတက်ကသိုလျ ဆကျတကျခဲ့ပမေယျ့ မိုကျခရိုဆော့ဖျမှာ အခြိနျပွညျ့ အလုပျလုပျနိုငျဖို့ ၁၉၇၅ မှာကြောငျးထှကျလိုကျပါတယျ။
အသကျ ၁၆ နှဈမှာ ဒျေါလာ ငါးသောငျးခှဲလောကျ စုဆောငျးမိနပွေီဖွဈတဲ့ Buffett ဟာ ဆယျကြျောသကျဘဝမှာ သတငျးစာပို့တဲ့ အလုပျကို စလုပျခဲ့တာပါ။ ဂေါကျသီးရောငျးတာ၊ ကားပွငျတာ၊ တံဆိပျတုံးရောငျးတာတှကေို ဆယျကြျောသကျဘဝမှာ လုပျခဲ့ပါတယျ။
Winfrey ဟာ သူအသကျ ၁၄ နှဈမှာ သူ့အဖဆေီ ပွောငျးနခေဲ့ပါတယျ။ အထကျတနျးကြောငျးမှာ ပျေါပွူလာအဖွဈဆုံး မိနျးကလေးဖွဈခဲ့ပွီးတော့ သူမပထမဆုံး အလုပျကို ၁၆ နှဈမှာ ရဒေီယိုစတရှေငျတဈခုမှာ ရခဲ့ပါတယျ။ ၁၉ နှဈ တက်ကသိုလျတကျနတေုနျး သူမကို တီဗှီစတရှေငျတဈခုက အလုပျချေါခဲ့တာကွောငျ့ စှနျ့စားပွီး ကြောငျးထှကျကာ အလုပျလုပျခဲ့ပါတယျ။
Mark ရဲ့ ဝါသနာက ပရိုဂရမျရေးတာပါ။ အသကျ ၁၂ မှာ သူ့အဖရေဲ့ ရုံးအတှကျ စာပို့ ပရိုဂရမျတဈခုကို ရေးပေးခဲ့ပါတယျ။ အထကျတနျးကြောငျးမှာ Music Streaming Platform တဈခုကို ရေးသားခဲ့ပွီး Microsoft နဲ့ AOL က ကမျးလှမျးခဲ့တာကို ပယျခခြဲ့ပါတယျ။ Harvard မှာနတေဲ့ အစောပိုငျးနှဈတှမှော သူ့အဆောငျခနျးထဲကနေ Facebook ကို တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ Facebook မှာ ပိုအခြိနျပေးနိုငျဖို့ နောကျနှဈမှာ ကြောငျးထှကျခဲ့ပါတယျ။
Tesla နဲ့ SpaceX CEO ဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးကှနျပြူတာကို သူအသကျ ၁၀ နှဈမှာ ဝယျခဲ့ပွီး နောကျနှဈနှဈကွာတော့ Blaster ဆိုတဲ့ ဂိမျးတဈခုရဲ့ Code ကို ရေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီ ဘီလြံနာကတော့ သူ့လုပျငနျးတှကေို အသကျ ၁၂ နှဈမှာ စတငျလုပျကိုငျခဲ့တာပါ။ တဈဘူးကို ၃ဒျေါလာ အမွတျနဲ့ အမှိုကျအိတျဘူးတှကေို Door to Door လိုကျလံ ရောငျးခခြဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ ကြောငျးမှာလဲ တံဆိပျတုံးတှနေဲ့ ဒင်ျဂါးပွားတှေ ရောငျးခဲ့ပါသေးတယျ။ ကိုယျ့စားရိတျ ကိုယျရှာပွီး တက်ကသိုလျ တကျခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၄ နှဈနဲ့ ၁၆ နှဈအတှငျး ဒီ ဘီလြံနာလောငျးလေးဟာ သူ့အဖိုးရဲ့ လယျတောအိမျမှာ ပစ်စညျးတှေ ပွငျရငျး အခြိနျကုနျခဲ့တာပါ။ နောကျပိုငျးမှာ McDonald မီးဖိုခြောငျမှာ အလုပျသမားလုပျခဲ့ပါသေးတယျ။ နောကျဆုံး Bezos နဲ့ သူ့ရညျးစားဟာ ကလေးတှအေတှကျ ဆယျရကျ နှရောသီစခနျး Dream Institute ကို စတငျတညျထောငျခဲ့ပါတယျ။
၁၉၆၈ မှာ အသကျ ၁၇ နှဈလူငယျ Branson ဟာ Student လို့ချေါတဲ့ လူငယျမဂ်ဂဇငျးတဈခုကို ထုတျခဲ့ပွီး ကွျောငွာကနတေငျ ဒျေါလာ ၈ထောငျ မွတျခဲ့ပါတယျ။ နောကျ ၂ နှဈအကွာမှာ အုတျခဲဆိုငျဖှငျ့ခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ အဲဒိအဆောကျအဦးက Virgin Record ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျဘဝမှာ Icahn ဟာ ပရငျစတနျ တက်ကသိုလျကို ဝငျခှငျ့ရပမေယျ့ ငှပွေတျနခေဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ပြျောပှဲစားရုံတဈခုမှာ စားပှဲထိုး လုပျခဲ့ပါတယျ။ ကလပျပိုငျရှငျတှကေ ပိုကာကစားရာမှာ Icahn ကို ချေါကစားခဲ့ပါတယျ။ ကစားနညျးကို ကြှမျးကငျြလာပွီးနောကျမှာတော့ တဈနှရောသီကို ဒျေါလာ ၂ထောငျ ရှာနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ခုခြိနျမှာတော့ ၂၄ ဘီလြံလောကျ ပိုငျနပေါပွီ။
Nike တညျထောငျသူဟာ သူ့ကြောငျးမှာ အပွေးသမား တဈယောကျပါ။ တက်ကသိုလျရောကျတော့လဲ ဆကျပွီး အပွေးပွိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူ အပွေးဖိနပျတှကေို အရညျအသှေး အသဘောမကရြာက စပွီး ၁၉၆၄ မှာ Nike ကို တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။
US Fedral Reserve ရဲ့ Chairman Yellen ဟာ ဆယျကြျောသကျအနနေဲ့ အတေျာ့ကို တျောတာပါ။ အထကျတနျးကြောငျး နောကျဆုံးနှဈမှာ တက်ကသိုလျက သခငြ်ျာအတနျးတှေ သှားတကျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၆၃ မှာ Class Scholar အဖွဈ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ကြောငျးသတငျးစာရဲ့ အယျဒီတာခြုပျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Previous: သူရဲကောင်း Karoly Takacs
Next: ချစ်သူကို အမြဲပျော်ရွှင်နေစေဖို့